Kanjani ukwenza isakhiwo se-ecommerce link?
Isixhumanisi sakhiwo yindlela enhle umuntu angayithuthela ngayo kwi-website yakhe ye-ecommerce. Uma umgomo wakho oyinhloko ukwandisa ukuthengisa kusuka kumakhasimende abuyayo, ukuxhumanisa isakhiwo yilokho okudingayo. Ngezansi ungathola amasu ambalwa wokwenza ama-ecommerce ekuxhumaneni okusebenzayo. Bheka kuzo zonke futhi ukhethe okukuthandayo kakhulu.
I-Influencer Outreach Strategy
Enye indlela elula yokuthola izixhumanisi ngokusebenza nabathonya - barum bravuris 215 65 15. Ukugijima uhlelo lokugqugquzela kungokukhetha abantu abakhulu abakwazi ukuletha okuqukethwe okufanele kubathengi bakho abaqondisiwe. Gxila ekwakheni ubudlelwane nalabo abathonya abaxhumeke ku-inthanethi abangakwazi ukwabelana ngolwazi kanye nokubuyekezwa mayelana nomkhiqizo noma isevisi yakho. Uma ungazizwa uthandana nokuzibandakanya ngokwakho, ungahlala uqasha isakhiwo sokuxhumanisa ochwepheshe noma inkampani yokugqugquzela. Ungasebenza nesikhulumi sephonya. Ngokuvamile, ukugqugquzela ukufinyeleleka kufaka phakathi izici ezilandelayo:
Ukucwaninga abathonya abangaba khona;
Ukuxhuma nalabo abanesithameli esifanayo;
Ukwenza isipho esilingayo;
Ukusebenza nabathonya abamukela isipho;
Ukulandelela i-ROI yomkhankaso womkhiqizo wakho.
Qinisekisa ukuthi imigomo yakho inembile futhi iyalinganiswa ngangokunokwenzeka. Ukuba nomgomo ocacile futhi ocacile kusiza kangcono ukuhlola impumelelo noma ukwehluleka komkhankaso wokwakha umxhumanisi we-ecommerce.
Thatha Inzuzo Yezindawo Zokubukeza
Amasayithi wokubukeza ngokuvamile aphakama phezulu ku-Google. Zingaholela ezingxenyeni eziningi ze-websource yakho ye-ecommerce kanye nokwandisa ukwethembana nokuthembeka kumkhiqizo wakho. Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili eziyisisekelo zamawebhusayithi wokubukeza:
amasayithi wokubuyekeza okuqukethwe (TechCrunch);
Amasayithi wokubuyekezwa kokuqukethwe komsebenzisi (i-Yelp, i-TripAdvisor).
Uma uzama ukusetha isu lokuthola uhlu kumasayithi okubukeza, ochwepheshe be-Semalt basikisela ukulandela izinyathelo ezilandelayo:
Yakha uhlu lwamasayithi wokubukeza owenziwe ngumsebenzisi ufuna ukukhomba;
Thola ukuthi inkampani yakho isivele ibhaliswe. Uma kukhona iphrofayela etholakalayo eqinile yakho, qiniseka ukuthi uyayifaka;
Yabelana ngezibuyekezo kuma-social media nakuwebhusayithi yakho njengoba zitholakala.
Khumbula, noma yikuphi ukubuyekezwa kudinga ukuthembeka. Ungalokothi uzame ukufihla noma ukususa ukubuyekezwa okungalungile - izenzo ezinjalo zizokwenza iklayenti evele idangele imane icasuke. Ngokususa imibono yabo, ubonisa ukuthi awunandaba nempendulo yabo. Esikhundleni sokususa amazwana, xolisa esidlangalaleni futhi wenze isifungo sokwenza kangcono.
Izixhumanisi zangaphakathi ezihlobene akufanele zicatshangelwe
Nakuba izincomo ezingenhla zihlobene nokwakhiwa kwesixhumanisi sangaphandle ngokwakha ubudlelwane obuseduze nabagqugquzeli namakhasimende, isakhiwo sakho sangaphakathi sokuxhumanisa imizamo akufanele inganakiwe. Cabanga ukufaka i-plugin ebonisa ngokuzenzakalelayo imikhiqizo noma amasevisi ahlobene nalowo umsebenzisi okwamanje. Ukwengeza iwijethi yemikhiqizo ehlobene kumakhasi akho e-ecommerce kuzosiza ukukhulisa izinga lokuguqulwa kanye nesikhathi esichithwa kuwebhusayithi njengoba abasebenzisi bebheka ezinye izinto.
Enye indlela yokubona ukuthi imiphi imikhiqizo namasevisi avame ukuthengwa ndawonye kusetshenziswa idatha ye-Google Analytics. Isebenza ngale ndlela elandelayo: uma wazi ukuthi yiziphi izinto ezivame ukuthengwa ndawonye, ​​uzokwazi ukuthi uzokutusa nini esikhathini esizayo.
Akukho okuphikisanayo ukuthi ukuxhuma nokusebenza nabathonya ekuthuthukiseni ukuxhumana kwe-ecommerce kudinga isikhathi esiningi futhi ukubekezela. Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi imizamo yakho izokhokha, futhi uzobona isitolo sakho se-ecommerce ekhasini lokuqala le-Google.